Ciidamada huwanta ah oo dib ula wareegay deegaanka Garasweyne ee gobolka Bakool – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada huwanta ah oo dib ula wareegay deegaanka Garasweyne ee gobolka Bakool
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaaalka Soomaaliya oo garabsanaaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo AMISOM ay dib ula wareegeen deegaanka Garasweyne oo qiyaastii 50km u jirta degmada Xudur.
Ciidamadaan huwanta ah ayaa howlgalo qorsheysan waxay ku qaadeen deegaanka Garasweyne, halkaas oo todobaadkii hore ay la wareegeen ciidanka Al-shabaab, kadib markii ay halkaasi iskaga baxeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee Itoobiya.
Gudoomiyaha degmada Xudur oo la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay sarkaal ka tirsan Xarakada Al-shabaab, iyadoona sidoo kale laga qaatay qori iyo boosh uu sarkaalkaasi watay.
“Waxaa howlgalkaasi fuliyay ciidanka huwanta oo si wadajir ah howlgalkaasi u qaaday, sarkaal Shabaab ka tirsan ayaan ku dilnay qori iyo boosh ayaan ka soo qaadanay, waxaana amaanka deegaanka sugaaya ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM” Sidaas waxaa yiri guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ka wada deegaanada ku yaala gobolka Bakool, kuwaas oo doonaya inay Al-shabaab ka saaraan deegaanada gobolkaasi.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee Itoobiya ay gebi ahaan isaga baxeen deegaanka Garasweyne ee gobolka Bakool, waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay halkaas la wareegay ciidanka Al-shabaab, inkastoo haatan ay ciidamada huwanta ah dib u la wareegeen deegaankaas.